Ukungcatshwa 3D – Imposter Hunt Cheats&Ukuqhawula – Iingcebiso ze-Android cheats
Ukungcatshwa 3D – Imposter Hunt Cheats&Ukuqhawula
Ukungcatshwa kwe-3D-Ngubani onosathana ngaphakathi? 👺
Phezulu kumdlalo wokuzonwabisa owenziwe ngumtyholi? Joyina intshukumo eyonwabisayo kwihlabathi lokuzingela okanye lokuzingelwa le-Betrayal 3D, apho utshintshela khona iindima phakathi kukaMtyholi noMkhuseli.
👹 Xa unguMtyholi, umsebenzi wakho kukukhupha bonke abanye abalinganiswa ngaphandle kokubanjwa: sebenzisa ubuchwephesha bakho kunye nobuchwephesha bokubulala ukuze uchwechwe kumlinganiswa ngamnye ngokulandelelana kwaye ubaxhelele ngelixa kungekho mntu ujongayo., uze uphephe ukubhaqwa ngelixa isibali-xesha sisehla.
👮 Njengomkhuseli, Uya kuwadinga onke amandla akho okubona kunye nokuxhuzulwa ukuze ubambe umbulali ngaphambi kokuba afumane ithuba lokukubulala kunye nabo bonke abanye abantu ababukeleyo abamsulwa- ngaphandle kokuba ubabambe esenzweni., awusoze wazi ukuba ngubani na onosathana ngaphakathi!
MANENE NAMANENEKAZI, KUKHO UMBULALI PHAKATHI KWETHU... 🕵️‍♂️
★ Ukweliphi icala? Iingxaki bubomi okanye ukufa, kodwa uthatha isigqibo sokuba ukwicala leengelosi okanye ungathanda ukubaleka ngokwenza ulwaphulo-mthetho olubi kulo mdlalo kulula ukuwudlala kodwa okhawulezayo nowonwabisayo ongenasiphelo..
★ Yiya kwi-spree - nge-over 120 amanqanaba ahlukeneyo okudlala, ukubulala 🔪, isiphithiphithi kunye nentshukumo 🔥 ayinakuphela. Njengoko uqhubela phambili ngomdlalo, iindawo ziba nkulu kwaye zibe ninzi i-labyrinthine, kwaye inani labalinganiswa liyakhula kwaye likhule, ikwenza kube nzima ngakumbi ukunqanda isiphelo esikhohlakeleyo okanye-ukuba nguwe owenza isiphelo esikhohlakeleyo-ukubaleka ungabonwa.
★ Master of disguises - amanqanaba apheleleyo okuqhubela phambili ngomdlalo kwaye ufumane umvuzo kubandakanya 38 izikhumba zabalinganiswa ezahlukeneyo ezimele archetypes bhanyabhanya eyimfihlo, kunye neendawo ezintsha ezinomtsalane kunye nemali engaphakathi kumdlalo.
★ Iindlela zikaMtyholi – imithetho ithe ngqo, kodwa umdlalo womdlalo uhlala uphuculwa ngoomatshini abatsha abakhohlisayo, kuqukwa ii-jump pads ezinceda abaKhuseli ukubaleka ukuya kwindawo yesiganeko solwaphulo-mthetho, Imijelo evumela ababulali 🥷 ukuba bahambe besuka kwelinye igumbi baye kwelinye ngobuchwephesha bokugqibela, iingcango ezitshixwayo, kunye neekhamera zeCCTV ezinokubona ngqo ngokuzifihla kwengelosi.
★ Zonke ezona ngoma zibalaseleyo-i-Betrayal 3D iqhayisa ngoyilo lwabalinganiswa olonwabisayo kunye nesandi esivakalayo esibulalayo esikhaba ngelona xesha loxinzelelo olukhulu lokuphucula intshukumo kunye namava akho omdlalo..
UMtyholi ANGENA KUWE?
Ufuna yonke imincili yokuba ngumcuphi we-ace kunye nombulali we-arch? Ukukhangela umdlalo obonelela ngamaqhekezana obungakanani bokuluma kunye neadrenaline? Ukulungele ukudlala macala omabini omthetho? Unomdla wokuvavanya ubuchwephesha bakho kunye nezakhono zeqhinga?
Khuphela iBetrayal 3D ngoku kwaye ungene kwihlabathi elinomsindo lokubulala, ukungcatshwa, kunye nolonwabo lukaMtyholi.
Udidi: Ukukopela kunye nokuHacker okanye iiNgcebiso Iimpawu: Betrayal, Ukukopa, Hunt, Imposter
← Utitshala owoyikayo: Ukubaleka eSikolweni – Ukukopa&Ukuqhawula Bavuthele – Ukukopa&Ukuqhawula →
Survival Game – Impostor 3D Cheats&Ukuqhawula
SLIME – ISEKAI Memories – Ukukopa&Ukuqhawula
Moshquito! – Ukukopa&Ukuqhawula
Octopus Games: K Challenge 456 Ukukopa&Ukuqhawula
Pico Park Puzzle – Ukukopa&Ukuqhawula
Bo – Ukukopa&Ukuqhawula
My Little Universe – Ukukopa&Ukuqhawula
Red Light Green Light Shooter Cheats&Ukuqhawula
Imidlalo yeskwidi – Ukukopa&Ukuqhawula
Umngeni weskwidi: Survival Game – Ukukopa&Ukuqhawula